Kedu ihe bụ AUR na otu esi enyere ya aka na Arch Linux na nkwekọrịta | Site na Linux
Kedu ihe bụ AUR na otu esi enyere ya aka na Arch Linux na nkwekọrịta
Ebe a na blog ọtụtụ oge anyị na-ekwu maka ntinye nke ụfọdụ ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa n'ozuzu na Linux, nan nke kacha gbalịa itinye nkesa ndị kachasị ewu ewu.
N'ime ha, m na-agunye Arch Linux na ngwa ya. Ọ bụ ezie na m ga-achọ ikwu maka naanị otu iche, enweghị m ike ịhapụ ndị ọzọ, n'ihi na n'ikpeazụ ha nwere otu ndabere.
Na ọtụtụ n'ime ndị a posts ha n'ozuzu ha na-atụ aro ịwụnye site na AUR na iji "AUR inyeaka" iji mee nke ahụ.
Maka ndị ahụ ndị na-agụ akwụkwọ na-amaghị nke a anyị ga-ekwu ntakịrị banyere nke a taa.
Ndị bụ Ndị ọrụ Linux nwere oge ụfọdụ iji, kwesiri ịchọpụta okwu a "repository" nke bụ sọftụwia.
Nke a pụtara na ọ bụ ebe nchekwa ebe enwere ike ịnweta ngwanrọ ngwanrọ ma wụnye na kọmputa.
Enwere ike ịdebe nchekwa (nke a na-akpọkwa repos) n'ime ụdị abụọ: nchekwa gọọmentị na nchekwa nke ndị ọzọ (onye ọrụ) na-elekọta ndị ọrụ ọ bụla.
N’ụzọ doro anya, ndị ọrụ gọọmentị repo sitere na Arch Linux, Manjaro, Antergos ma ọ bụ nkesa ọ bụla sitere na Arch Linux.
N'aka nke ọzọ, e nwere Archiving Archiving Repository (AUR), Kedu ihe ọ bụ obodo na-edebe ego maka Arch Linux na mmeputa ya.
Dị ka ụlọ ọrụ gọọmentị, ha nwekwara nkọwa ngwugwu (PKGBUILD) nke enwere ike ikpokọta site na isi iyi na makepkg wee tinye ya na pacman. AUR dị iji kesaa nchịkọta ọhụrụ site na obodo.
1 Wụnye na iwepu ngwa
1.1 Na-enyere AUR aka Arch Linux na nkwekọrịta
Wụnye na iwepu ngwa
Iji wụnye ngwa na Arch Linux ọ bụla dabere na ma ọ bụ nweta usoro ị nwere ike "Tinye / Wepu ngwanrọ" a na-eme nke a site na ọnụ site na enyemaka nke Pacman.
Agbanyeghị na gburugburu desktọọpụ, ha na-agunyekarị ngwa ọrụ iji nyere gị aka ịwụnye ma ọ bụ wepu ngwa.
Na nke a anyị nwekwara ike iji ngwa ama ama akpọrọ Octopi, nke bụ eserese eserese maka Pacman nke na - enye anyị ohere ịmekọrịta AUR.
Na-enyere AUR aka Arch Linux na nkwekọrịta
Iji nwee ike ịgbakwunye nkwado AUR na Arch Linux ewepụtara na sistemụ nke ha nwere ike ịnweta ọtụtụ puku ngwa nke obodo mebere ma lekọta ya.
N’ịtụle na ngwa ndị a bụ nke obodo na-achụ, ọ bụghị ngwa niile na-emelite kwa oge.
N'ezie, enwere ọtụtụ ngwa na-emelitebeghị maka ihe karịrị afọ 5. Nwere ike ịchọ ịhapụ ụdị ngwa ahụ n'ihi na ha nwere ike ibute nsogbu nkwụsi ike sistemụ na ọnọdụ kachasị njọ ha nwekwara ike ibute ihe egwu.
Iji kwado nke a, dAnyị ga-agbakwunye ụfọdụ ahịrị na pacman.conf faịlụ anyị, nke anyị ga-agbakwunye usoro ndị a na njedebe faịlụ ahụ.
Naanị mepee ọnụ ma dezie nano ma ọ bụ editọ ederede kachasị amasị gị:
Y anyị tinye na njedebe:
Server = http://repo.archlinux.fr/ $arch
Ugbu a mere nke a, anyi aghaghi imezu iwu a, Iji mekọrịta ọdụ data na ebe nchekwa agbakwunyere na sistemụ:
Mere nke a ugbu a anyị ga-wụnye nnyemaaka iji nyere anyị aka ịwụnye ngwa ndị dị n'ime AUR, maka nke a, ị nwere ike ịkpọtụrụ isiokwu na-esonụ ebe m kwadoro otu.
Ha nwekwara ike ịhọrọ iji naanị otu njikwa sọftụwia ma zere iji akara iwu, dị ka m kwuru Octopi, nke bu ngw’ibu ngw’oru maka njiko Linux na ndi n’agha.
Ọ bụ ezie na M ga-atụ aro n'onwe gị ka ị jiri ọnụ ọnụ dị ka o kwere mee, ebe ọ bụ na n'ụzọ a, ha ga-amalite iji iwu mee ihe ma mụta ịhazi, gbanwee, melite ma jikwaa usoro ha.
Ọbụna gbadaa, wepu ebe eserese eserese, ma wughachi usoro na ndị ọzọ.
Nke a bụ otu n'ime nnukwu atụmatụ masịrị m banyere Arch Linux n'ihi na ọbụlagodi na ị tufuru ọnọdụ eserese, ọ bụrụ na ị wụnye site na onwe gị, ị ga-amata ihe ị ga-eme iji weghachite ya ọzọ.
Kedu, n'adịghị ka sistemụ ndị ọzọ, ndị ọrụ na-ara ara na ọtụtụ n'ime ha na-ahọrọ ịtinye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Kedu ihe bụ AUR na otu esi enyere ya aka na Arch Linux na nkwekọrịta
Ka ọ dị na mbụ
Nwoke ahụ chere na ị maara otu ihe ahụ ọ maara, ya mere na ị gụrụ ya, ị pụta dị ka azụ dị ka ihe ị banyere
Dezie faịlụ ahụ, ọ na - ekwu, ọ bụ archlinuxfr na brackets? M ga-ahụ ya dị ka a aha? Ekwesịrị m iwepu akara ngosi #? Ndi ahiri ndia (Server = http://repo.archlinux.fr/$arch) Ebee ka m ga-etinye ya? Na oghere? N’ebe a ị na-akwa ụta maka igbu oge
Zaghachi ka emerson
IssueHunt: usoro ohuru ohuru maka imeghe ego
Fedora 29 Beta ga-ewepụta n’izu na-abịa